Inkqubo elungileyo yokugcina isikrini kunye nokuhlela ividiyo- iGeofumadas
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/Inkqubo enhle yokugcina isikrini kwaye uhlele ividiyo
Ukufundisa i-CAD / GISUkuprinta kokuqala
Kweli xesha litsha le-2.0, iitekhnoloji zitshintshe kakhulu, kangangokuba zisivumela ukuba sifikelele kwiindawo ezazifudula zingenakwenzeka. Okwangoku izigidi zezifundo ziveliswa kwizihloko ezininzi kwaye zijolise kuzo zonke iindidi zabaphulaphuli, ekuhambeni kwexesha kuye kwaba yimfuneko ukuba nezixhobo ezigcina iintshukumo esizivelisayo ngekhompyuter, umzekelo, izifundo zevidiyo zifuna iinkqubo zokuhlela ezinje ngokusika, ukubalisa, ukongeza umxholo wokubhaliweyo okanye ukuthumela umxholo kumafomathi ahlukeneyo, ukubonelela ngemveliso esemgangathweni.
Kule nto kukho isixhobo esisetyenziswe ngabaqeqeshi ukubonisa uluntu indlela yokwenza enye inkqubo, ukusombulula iingxaki okanye ukufundisa nje. Sithetha ngazo Iscreen-O-matic, evumela ukurekhodwa kwiwebhusayithi yayo okanye ngokukhuphela usetyenziso kwiPC, ungasebenzisa nayiphi na le miboniso mibini yesicelo kuba ziyafana ncam. Eli nqaku libalaselisa izibonelelo zalo eziphambili.
Xa isihloko sokurekhoda soqeqesho sicacile, sivula isicelo sokwenza ukurekhodwa okufanayo, kwibar menu kunye ne "Rekhoda" iqhosha njengendlela yokuqala.
Emva koko isakhelo siboniswa, esenza umda apho yonke into ofuna ukuyibhalela ifumaneke, ifumaneke ukulungiswa kangangoko kufuneka. Ubonisa uhlobo lokurekhoda:
kuphela isikrini (1),
okanye isikrini kunye ne-webcam (3),
ukhetho oluhambelanayo lubekwe: umda othile wesikhathi (4),
okanye ukuba kuyimfuneko ukurekhoda izandi ze-PC (7).
Ungakwazi ukufikelela kwenye imenyu yokukhetha (8), apho uza kuchaza ukuba yintoni ikhampani yokumisa ikhefu, indlela yokubala phantsi, ibha yokulawula, ukulawula okurekhodiweyo okanye ukondeza.
Ukongeza into ethile yokugxininiswa njengemicibisholo, izikwere, iifowuni, zigqamisa enye itekisi, iya kwibha yintloko ngexesha lokurekhoda uze ufake inkinobho "ipensela". Ukurekhoda kuya kumiswa kwaye kuqala inkqubo yokongeza izinto ezininzi njengoko kucatshangelwayo, ungabona kumfanekiso olandelayo.
Ngokuphathelele yenza nkulu okanye esondelayo, kwinqanaba elithile lomgca ngexesha lokurekhoda, ukucofa kabini kwenziwe kwindawo ethile, uze uqhubeke nokurekhoda cindezela iqhosha elibomvu kwibar yamathuluzi uze uqhubeke nenkqubo.
Ekupheleni kwenkqubo yokurekhoda, ividiyo iya kuboniswa kwiwindow ephezulu yesicelo, kule festile ezinye iinkqubo zokuhlela ziyasetyenziswa, apho ungongeza khona izinto ze-multimedia, ezinjengemibhalo engezantsi ukusuka kwifayile okanye ukuqaphela izwi (udala umbhalo ngokwembali), iingoma zomculo (zinikela ezinye iifayile zomculo ngokusilelayo, okanye kunokwenzeka ukongeza ifayile ecinga ukuba iyiluncedo).
Ngokumalunga nokuhlelwa kwevidiyo, esi sicelo sigqibelele, sinika inani elikhulu lezixhobo zokwenza ukuba isifundo sevidiyo sibe yimveliso ekholisayo nengcaciso. Siza kuthatha nayiphi na ividiyo kwiPC yethu ukubonisa ukuba zeziphi izinto ezinokwenziwa kwimenyu yokuhlela. Xa ufaka ividiyo, isikrini sokuqala esinevidiyo (1) kunye nexesha elifanelekileyo (2) zibonisiwe, kumda wasekhohlo ziipropathi zelaphu (3), oko kukuthi, ubungakanani bevidiyo, kule meko ngu-640 x 480.
Kwakhona, iipropati zomsindo (4) ziyabonwa, apho kukho ukhetho lokuthumela i-audio yevidiyo okanye ukungenisa nayiphi na enye esuka kwi-PC ukuyifaka kwindawo yokurekhoda. Ukuba le vidiyo ibhalwe ngokukhethwa kwesikrini kunye nekhamera yewebhu, unako ukuvula ukhetho ukubonisa ibhokisi ngomfanekiso webcam yewebhu (i-5), kuya kwenzeka nangesikhokhelo, inokuboniswa okanye ifihliwe kwividiyo ( 5).
Amathuluzi okurekhoda anakho Iscreen-O-Matic Zizo zilandelayo:
Sika: sisetyenziselwa ukunciphisa amaqhekeza evidiyo angafanelekanga.
Kopisha: esi sixhobo sikhetha zonke iigqabantshana zevidiyo ezifuneka ziphindwe
Fihla: ungayifihla ibhokisi lesithombe kwikhamera yewebhu okanye isikhombisi se mouse.
Faka: ngumsebenzi wokongeza ukurekhodwa okusha, ukurekhoda kwangaphambili, faka ikhefu kwividiyo, engeza ifayile yevidiyo yangaphandle okanye unamathisele isigaba sokurekhoda esiye sakopishwa ngaphambili kwenye ividiyo.
Qalisa: nge-microphone ungongeza ifayile yomsindo kwividiyo.
Ukululeka: ngeli sixhobo unokubeka izinto ezininzi kwividiyo yakho, ukusuka kwiifayile ezinjenge-blur, imifanekiso, imifanekiso yevidiyo, iintolo, ugxininisa kuphela inxalenye yevidiyo ngebhokisi, iibhalo (khetha umbala, ifomathi kunye nohlobo ifonti), unamathisele ukunqumla (ukubeka iintolo ezininzi, enye yenziwe, kwaye ikopishwe kwaye idliwe kaninzi kangangoko kunyanzelekile).
Faka endaweni: yenza endaweni yevidiyo okanye uguqule isakhelo esithile sevidiyo uze ufake enye.
Ukukhawuleza: ukukhawuleza ukurekhoda okanye ukukhawulezisa.
Utshintsho: yongeza uhlobo lokutshintsha ukusuka komnye umfanekiso ukuya kwelinye.
Umqulu: ulungelelanise iziqendu zevidiyo kunye nomqulu ophezulu okanye ophantsi.
Ukuvelisa iividiyo zokugqibela
Ekupheleni kwevidiyo, kwaye ngokuhambelana nomshicilelo, iqhosha "Lwenziwe" licofa, elikhokelela kwisikrini esiphezulu sesicelo, kukho iindlela ezimbini zokugcina:
Gcina kwikhompyutheni: khetha ifomathi yevidiyo phakathi kwe-MP4, AVI, FLC, GIF, faka igama lefayili kunye nomzila wokuphuma, khankanya umgangatho (ophantsi, ophezulu okanye oqhelekileyo) ekuqakrazeni ekupheleni ukupapasha.
I-Screencast-O-Matic: olu khetho lubonisa idatha ye-akhawunti epapasha ividiyo, isihloko, inkcazo, iphasiwedi, isiqhagamshelo somntu (xa sifunekayo), umgangatho, imixholo engezantsi nalapho iya kubonakala khona. Ukubonakala kwevidiyo kufaka kwiipulatifomu zewebhu eziyaziwayo, ezifana neVimeo, i-YouTube, i-Google Drayivu okanye i-Dropbox, ukuba ayifanelekanga ukuyipapasha, olu khetho luyacinywa.
Kukho izinto ezininzi ezinokwenziwa kunye eskrinini-O-ebu- for zipalini kunokwenzeka ukuba abhale imizuzu 15, MP4, AVI kunye neefomathi FLV nokulayisha ku kumaqonga web ngasentla, kunjalo, ngokuba abasebenzisi premium kukho iingenelo ezininzi, ezifana nokufumana indawo yokugcina inthanethi kunye nokubuyiselwa kwimeko nayiphi na ukungaphumeleli, kunye nalo msebenzi ugcina indawo kwi-disk yePC kwaye unokufikelela kwiwebhusayithi kuzo zonke iirekhodi kwiphina ikhompyutha .
Abasebenzisi premium Ndonwabela ukufumana izixhobo zokuhlela, ukurekhoda umsindo ngokusebenzisa ii-microphone, ukurekhoda kuphela kwikhamera yewebhu, ukudweba nokucima ngexesha lokurekhoda.
Ukwazi ngakumbi, tyelela i-Screencast-O-matic